बैंकको लकरमा राखिएको सुन झिक्न जाँदा ढुंगा फेला परेपछि ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/बैंकको लकरमा राखिएको सुन झिक्न जाँदा ढुंगा फेला परेपछि !
बैंकको लकरमा राखिएको सुन झिक्न जाँदा ढुंगा फेला परेपछि !
काठमाण्डौ । घरमा असुरक्षित हुने भएको आजकल मानिसहरुले वहुमुल्य चिज बैंकको लकरमा राख्ने गरेका हुन्छन् । त्यसका लागि निश्चित रकम पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । वहुमुल्य बस्तु सुरक्षाका लागि राखिने लकर कति सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हालै भारतमा फेला परेको छ । एक जना मानिले लकरमा सुन राखेका थिए । तर पछि झिक्न जाँदा सुनको ठाउँमा ढुंगा थुपारेको फेला परेको छ । यो घटना भारतको राजस्थानको जालौर जिल्लामा भएको हो । त्यहाँका एक व्यक्तिले बैंकको लकरमा सुनका गरगहना राखेका थिए।
त्यस पछि उनले ५ वर्ष सम्म त्यो चलाएनन् । जव उनलाई त्यो सुनको आवश्यकता पर्यो उनी बैंकमा सुन निकाल्न गए । जव लकरको साँचो खोलेर हेर्दा उनी छाँगावाट खसेजस्तै भए । उनले सुन राखेको ठाउँवाट सुन गायव थियो भने लकरमा ढुंगा थुपारिएको थियो ।
हालै राजस्थानको जालौरको तिलकद्वारस्थिर एसबीआई बैंकमा यो घटना भएको हो। स्थानीय पारसमल जैन नाम गरेका ब्यत्तिले एसबीआई बैंकको लकरमा सुरक्षाका लागि सुन राखेका थिए । उनले ८०० ग्राम सुन राखेको बताएका छन् । त्यती ठूलो परिमाणको सुन गायब पारेर त्यसको ठाउँमा ढुंगा राखेको घटनाले बैंकमा खैलाबैला भएको छ ।
पारसमल महाराष्ट्रको भिवन्डीका ब्यापारी हुन् । लकडाउनका क्रममा उनी २० दिनअघि मात्रै जालौर फर्किएका थिए। लकडाउनका कारण आर्थिक समस्या भएपछि उनले त्यो सुन झिकेर काम चलाउने निधो गरे । बैंकमा गएर आफ्नो लकर खोल्न लगाएर हेर्दा त ढुंगा राखिएको छ ।
पारसमलले यस विषयमा कोतवाली प्रहरी थानमा रिपोर्ट लेखाएका थिए। रिपोर्टमा उनले आफूले बैंकको लकरमा राखेको ८०० ग्राम सुनका गरगहनाको ठाउँमा ढुंगाहरु फेला परेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रहरीमा रिपोर्ट दर्ता गर्नुअघि पारसमलले बैंक शाखाका व्यवस्थापक राम दीनसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्दा सम्भव नभएपछि प्रहरीको सहयोग लिनु परेको बताएका छन् । उनले व्यवस्थापक फेला नपरेपछि बैंकका अरु कर्मचारीसंग कुरा गर्न खोज्दा पनि त्यो पनि सम्भव भएन ।
उता व्यवापक राम दीनले उपभोक्तालाई दिइएको लकरको चाँबी उपभोक्तासँगै हुने भएकाले कर्मचारीलाई थाहा नहुने दाबी गरेका छन् । ‘उपभोक्ताबाहेक उसको लकर अरुले खोल्ने सम्भावना नै छैन’, उनले भने, ‘जब बैंकका अधिकारीहरुसहित पारसमलले लकर खोले तबसम्म लकर सही नै थियो तर लकरभित्र कसरी सुनको ठाउँमा ढुंगा राखियो वा भेटियो रहस्यमय बनेको छ।’ व्यवस्थापक रामले यस विषयमा अनुसन्धान गरिने बताएका छन्।
‘मलाई कुनै पनि पदको लोभ छैन्, मेरो चाहना सरकार लोकप्रिय ढंगले चलोस् ’ – नेता नेपाल